Offi - Journey Planner 11.0-google Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 11.0-google လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း Offi - Journey Planner
Offi - Journey Planner ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အများသုံးဘို့အားလုံး-In-One app ကို
🚍 ခရီးစဉ်ကိုစီမံ (တံခါးတံခါးကို),
(နှောင့်နှေးအပါအဝငျ) ⏱️နထေိုငျ ထွက်ခွာကြိမ် ,
📌 အနီးအနားဘူတာ (ကမြေပုံပေါ်တွင်လည်း) နဲ့
🗺️အပြန်အလှန် ကွန်ရက်ကအစီအစဉ်များကို ။
အရာရှိများသည်ရွေးချယ်ထားသောအများသုံးအာဏာကို တာဝန်ရှိသူတဦးကအချိန်ကိုစားပွဲနှင့်ဆက်သွယ်မှုအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုကိုမှန်ကန်စေသည်! ဤသည်ပြတ်တောက်အဖြစ်မကြာမီအကူးအပြောင်းခွင့်အာဏာဒေတာသူတို့နှင့်အတူထည့်သွင်းထားပါတယ်အဖြစ်မြင်နိုင်ဖြစ်လာကြောင်းသေချာ။
ဒီ app အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာ ရှိပြီး သင်ခြေရာခံပါဘူး! အရာရှိများသာအခြားနည်းလမ်းများအတွက်တောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်ပေးနှင့်မအဘို့သင့်ပုဂ္ဂလိကဒေတာကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ဒီ app open source ဖြစ်ပြီး အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို ဖြစ်ပါတယ်, အရှင် အသိုင်းအဝိုင်းစီမံကိန်းကို ဖြစ်ပါတယ်။
🇺🇸ယူအက်စ်အေ (Philadelphia တွင်ချီကာဂို)
🇦🇺သြစတြေးလျ (ဆစ်ဒနီ, New South Wales, မဲလ်ဘုန်း, ဗစ်တိုးရီးယား)
🇧🇪ဘယ်လ်ဂျီယံ (NMBS, SNCB, De Lijn, TEC)
🇳🇴နော်ဝေ (အော်စလို & ဘာဂန်)
🇫🇷ပြင်သစ် (Provence-Alpes-Cote d'Azur)
🔸 Austin (CMTA, CapMetro)
ဆစ်ဒနီ & New South Wales 🔸
🔸ဘာလင် & Brandenburg အမည်ရှိသတို့သား (BVG, VBB)
🔸 Frankfurt & ရိုင်း-ပင်မ (RMV)
🔸မြူးနစ် / münchen (MVV, MVG)
🔸 Augsburg (AVV)
🔸 Schwerin & Mecklenburg-Vorpommern (VMV)
🔸 Rostock (RSAG)
🔸 Kiel, Lübeck & Schleswig-Holstein (nah.sh)
🔸 Hannover & အောက်ပိုင်း Saxony (GVH)
🔸Göttingen & တောင်ပိုင်းအောက်ပိုင်း Saxony (VSN)
🔸 Braunschweig (BSVAG)
🔸 Bremen (BSAG)
Bremerhaven & Oldenburg (VBN) 🔸
🔸 Leipzig & Saxony-Anhalt (နာဆာ)
🔸 Dresden (ဒီဗွီဘီ, VVO)
Chemnitz & Mittelsachsen (VMs) 🔸
🔸အက်ဆင်း, ဒေါ့မွန်, Düsseldorf & ရိုင်း-Ruhr (VRR)
🔸 Cologne / Köln, Bonn (KVB, VRS)
🔸Lüdenscheid & Märkischer Kreis (MVG)
🔸 Paderborn & Höxter (nph)
🔸 Mannheim & ရိုင်း-Neckar (VRN)
🔸 Reutlingen & Neckar-Alb-Donau (NALDO)
🔸 Ulm (Ding)
🔸 Karlsruhe (KVV)
🔸 Trier (VRT)
🔸 Nuremberg / Nürnberg, Fürth & Erlangen (VGN)
Würzburg & Regensburg (VVM) 🔸
Strasbourg & Freiburg 🔸
🔸 Baden-Württemberg (NVBW)
Plauen & Vogtland (VVV) 🔸
🔸ဗီယင်နာ / Wien, အောက်ပိုင်းသြစတြီးယား & Burgenland
🔸 Linz (Linz AG က)
🔸 Innsbruck ရှိ (IVB)
Graz & Styria (STV) 🔸
Bregenz & Vorarlberg 🔸
🔸 Lucerne / Luzern (VBL)
🔸ဇူးရစ် / Zurich (ZVV)
🔸ဘရပ်ဆဲလ် / ဘရပ်ဆဲလ် (STIB, MIVB)
🔸ကိုပင်ဟေဂင် / Kopenhagen (Metro)
🔸 Warsaw ကို / Warschau (ZTM)
🔸အပြည့်အဝကွန်ယက်ကို access ကို, ရုံးထွက်ခွာနှင့်ပြတ်တောက်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်တွေန်ဆောင်မှု query ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကြောင်းမူကား,
🔸ဆက်သွယ်ရန် / ပြက္ခဒိန်, သင်၏မိတ်ဆွေများရန်သင့်ပြက္ခဒိန်သို့မဟုတ် e-mail, တစ်ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်သိုလှောင်, ရုံးတစ်ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ရပ်ကနေသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်တည်နေရာမှလမ်းကြောင်းသင်သည်တတ်နိုင်ဒါ။
Offi - Journey Planner အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Offi - Journey Planner အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Offi - Journey Planner အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Offi - Journey Planner အား အခ်က္ျပပါ
rubystars စတိုး 5.52k 1.58M
Offi - Journey Planner ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Offi - Journey Planner အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 11.0-google
ထုတ်လုပ်သူ Andreas Schildbach
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://oeffi.schildbach.de/privacy_policy.txt
App Name: Offi - Journey Planner
Release date: 2019-09-18 21:49:27
လက်မှတ် SHA1: DD:FF:CA:A0:FC:1C:92:76:20:05:36:BC:55:CF:4D:3B:B5:18:75:93
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Andreas Schildbach
Offi - Journey Planner APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ